Mampivoitra ny mahazo ireo mpitsoa-ponenana ny rindrankiran’ny tarika Pussy Riot tao an-jaridainan’i Dismaland najoron’i Banksy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2015 10:27 GMT
Pussy Riot, tarika Rosianina mihira punk, izay efa tany am-ponja noho izy ireo nihira nanakiana ilay filoham-pirenena Vladimir Putin tao anaty katedraly ôrthôdôksa ny mpikambana sasany ao aminy, dia nanao seho an-tsehatra nanohina ny fo tamin’ny andro nanakatonana ny Dismaland, “zaridainam-pahatalanjonana” toerana fialam-boly tsy tena raikitra natsangan’i Banksy ilay mpanakanto mpanao hosodoko amin’ny rindrina ao Lôndra.
Nadezhda Tolokonnikova sy Maria Alyokhina, anisan’ny vehivavy mpitarika tao amin’ny tarika Pussy Riot, dia fantatra tsara ankehitriny ho mpanohitra ara-politika miaro ny zon’ny gadra any Rosia, sy nanangana ny tetikasa MediaZona manara-maso ny fanitsakitsahana ny zon’olombelona ao amin'ny rafi-pamonjana olona ao Rosia. Ny fampisehoana nataony tamin'ny 26 septambra tao Dismaland dia mbola misy tsirona zon’olombelona ihany koa – fa tamin’ity indray mitoraka ity dia nampifantoka ny zava-manjò ireo mpitsoa-ponenana maro avy amin'ny firenena toa an'i Syria, izay mitady toerana azo antoka any Eoropa amin'izao fotoana izao, izy ireo.
Ny fampisehoana nataon’i Pussy Riot niarahany tamin’ilay tarika Britanika The Connor Brothers, dia manasongadina hira iray “Refugees In,” [mpitsoa-ponenana anaty] izay midika fanehoana firaisankina amin’ireo mitady fialofana ao anatin'ny fotoanan'ny krizy. Ilay hira dia nampiasaina hanaovana feo amin'ny seho an-tsehatra iray maneho herimpo manasongadina mpiantsehatra mitafy ho toy ny mpanao fihetsiketsehana mifampitolona amin’ny polisy, sy ny mpihiran'ny Pussy Riot tao anatin’ny fonja, sady mitondra ireo sarontava miloko ny mari-pamantarana azy ireo.
Nilaza ny tarika Pussy Riot fa mbola manana eritreritra hanohy ny fanohanana ireo mpitsoa-ponenana avy any amin’ireo firenena manana fitondrana mpangeja ara-politika. “Raha tsy jerena ny fijery politikan'ny tsirairay, dia manana adidy ara-maoraly hanolotra fialofana ireo olona mandositra ny ady sy hiharan’ny fanenjehana isika, hoy ny Pussy Riot tao anatin’ny fanambarana iray ho an'ny mpampiely vaovao. “Ankatoavinay ny fisian'ireo fanamby atrehin’ny firenena Eoropeanina amin’ny fanekena ireo olona nafindra toerana an'hetsiny, saingy mbola mihoatra ny fanamby politika izy io – krizy maha olona ka noho izany, mila miara-mihetsika isika ary hitraka manoloana ireo fanamby”.
Niteny tamin'ny mpanangom-baovao ry Pussy Riot fa ny fampisehoana tao Dismaland dia fanombohana fotsiny amin'ny fikatrohana ataony ho an’ireo mpialokaloka. Ny volana Oktobra izy ireo, miaraka amin’ny The Connor Brothers, dia manana eritreritreritra hitsidika ny toby “atiala mikitroka” itoeran’ireo mpitsoa-ponenana any Calais, Frantsa (efa nalefa any Calais ho fanampiana amin’ny fananganana trano ho an’ireo mpitsoa-ponenana ny hazo sy ny fitaovana tao amin’ny toeram-pialambolin'i Dismaland).